kbs — Thu, 12/10/2009 - 21:29
लोकगीत लोककण्ठमा परम्परागत रूपमा जातीय जीवनको यथार्थ दर्शन हुन्छ । यसको अध्ययनले कुनै पनि देशको सभ्यता, संस्कृति, धर्म - नीति, रीति-थिति, कला-साहित्य, सामाजिक संरचनाको सूक्ष्म अनुभूति हुन्छ । यो शास्त्रीय आडम्वरबाट लोक जीवनको स्वभाविक उदगार हुन्छ । जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न पक्षबारे यसमा गहन चित्रण गरिएको हुन्छ ।
kbs — Mon, 11/30/2009 - 16:43
सेक्सपियरले भनेका छन्, "जिन्दगी एउटा नाटक हो ।" झन्डै सेक्सपियर शैलीकै नाटकबाट रंगमञ्चमा पाइला हालेका कलाकारहरूले साँचो अर्थमा नाटकलाई जिन्दगी बनाउन सके त ? हरपि्रसाद रमिाल लामो समयदेखि रोगले थलिएका छन् । श्यामदास वैष्णवले पनि रंगमञ्चमा नटेकेको दुई दशक नाघ्यो । मदनदास श्रेष्ठ भन्छन्, "१६ वर्षयता म मञ्चमा ओर्लिएको छैन ।"
kbs — Sat, 10/17/2009 - 18:26
तिहार नेपालीहरूको महान चाड हो । पाँच दिनसम्म भव्य रूपमा मनाइने तिहारलाई यम पञ्चक पनि भन्ने गरिन्छ । दीप र ज्योतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको तिहारलाई दीपावली वा दिवाली पनि भन्ने चलन छ । काग तिहार, कुकु
kbs — Sun, 10/04/2009 - 08:17
दसैँको शारदीय र सुरम्य ऋतुमा मात्र होइन, चैतको सानो दसैँमा समेत नेपाली जनमानसले हर्ष उल्लाससाथ दसैँ पर्व मनाउँछन् । बडादसैँको आगमनअघि नै दसैँ पर्व मनाउने तयारी हुन थाल्छन् । दसैँको घटस्थापनादेखि नै जन
kbs — Sat, 09/19/2009 - 09:48
"नारायणगोपाल हुने रहर त सबैले पाले तर नारायणगोपालले हासिल गरेको तालिम र कठोर अभ्यासतिर कसैले ध्यान दिएनन्," संगीतकार दीपक जंगमका यी शब्दहरूभित्र लुकेको छ, आजको पुस्ताको गायकीको यथार्थ । यसभन्दा ठ
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भजनको परम्परा लिच्छविकालदेखि नै भएको हुनुपर्दछ । किनभने केही लिच्छविकालीन अभिलेखहरूमा ईश्वर प्रार्थनाका हरफहरू फेला परेका छन् । उदाहरण स्वरूप हाँडीगाउँ सत्यनारायण स्थानको अभिलेखलाई लिन सकिन्छ । उक्त अभिलेखको ७३ औँ हरफमा "भगवत्तो द्धैपायनस्य स्तोत्रङकृत मनप्ररमेण" भनी अनुपरम भन्ने व्यक्तिले भगवान् द्धैपायन अर्थात् कृष्णको स्तुति गरेको पाइन्छ ।
अभिनयमा स्वरको महफ्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । स्वरको आरोह अवरोह नै अभिनय अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम हो । त्यसैले सबल स्वरका धनी अभिनयीहरूको कला यात्रा चिरकालिक हुने गर्दछ । भारतको हिन्दी चलचित्र संसारतिर हेर्ने हो भने त्यहाँ स्व. पृथ्वीराज कपुर, स्व. बलराज साहनी जस्ता इतिहास जितेका अभिनेताहरूदेखि लिएर स्व्. नरगिस, स्व्. नीनाकुमारीजस्ता संवेदनशील स्वरका धनी अभिनेत्रीहरूले आफ्नो बसल स्व्रको माध्यमले छोडेका छाप अविस्मरणीय बनेको छ ।
ज्ञानवाचक, सत्तावाचक, लाभवाचक र विचारवाचक विदधातुबाट वेदशब्द बन्ने भएकाले वैदिकमन्त्रहरूलाई विविध ज्ञानको भण्डारको रूपमा लिने गरिएको छ । आदिकल्पमा सृष्टिसत्ता सञ्चालनका लागि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रहृमाजीको मुखबाट उत्पन्न भएकाले वेदका मन्त्रहरू विनिर्गत स्वरूपका हुन् भन्ने भनाइ महाभारतमा आएको छ ।
kbs — Sun, 06/21/2009 - 15:43
अभियान कटुवाल संगीतको
kbs — Wed, 05/06/2009 - 13:35
हरिभक्त कटुवाल भन्थे, "हामीले हाम्रै माटो-ढुंगाको गीत गाएर अरूलाई आफूतिर तान्नुपर्छ ।"
भिपेन हजारकिा भन्छन्, "पहिला तिमी आफ् नै कल्चरलाई हेर, आफ्नै सभ्यताको गीत गाऊ । "
kbs — Thu, 04/23/2009 - 20:35
सोरठी लोकसाहित्यको कथावस्तु कुनै लामा घण्टौँ लाग्ने पनि हुन्छन् र कुनै छोटा र छरिता मिठासपूर्ण हुन्छन् । यहाँ कुनैका कथावस्तु त केवल घटनाको सानो डोरोमा मात्रै पनि विरचित हुन सक्छन् । जे होस्, कुनै न कुनै कथाको आधार हुन्छ-हुन्छ ।
"धेरै माया दिँदा रै'छन् ...।" ललिता कुँवरको गीत र अर्जुन नेपालीको संगीतमा स्वरूपराज आचार्यले गाएको यो एउटै गीत ८० हजारभन्दा माथिल्लो संख्यामा 'डाउनलोड' भइरहेछ । आनन्द अधिकारीका बास्ना एल्बमका सबै गीतहरू गन्ती गर्ने हो भने एक लाख नाघ्ने उनले हिसाब निकालेका छन् । 'नबिर्सें तिमीलाई, नपाएँ तिमीलाई' अञ्जु पन्तले गाएको यस गीतलाई पनि ५० हजारभन्दा बढी नै ग्राहकले आफ्नो मोबाइलमा भरे ।
तीन हाइकु (जोडी परेवा)
उपजातिमा पिन्जडाको सुगा